Mujjo gbara afọ ise wee jiri aka osisi tinye ya Mac | Esi m mac
Mujjo gbara afọ ise wee jiri aka osisi na-agba ya maka Mac
N'oge gara aga, anyị ahụla mkpuchi nke Mujjo mere na n'ọtụtụ oge, a raara ha nye naanị ngwaọrụ Apple. Oge a ihe anyị nwere na tebụl bụ ngwaahịa pụrụ iche maka emume nke afọ 5th ya ma ha ejirila ukpa ndị America weghachite, ya bụ, na-asọpụrụ gburugburu. Maka ndị na-amaghị ika a, anyị nwere ike ịsị na ha raara onwe ha nye imewe mkpuchi emere na ngwakọta pụrụ iche nke ajị anụ 100% chere na akpụkpọ anụ dị elu iji chebe iPhone, iPad, MacBook Air na MacBook Pro.
N'oge a maka ncheta afọ a ha họọrọ ịmalite nke a handcrafted osisi ebu ikpe na igwe anaghị agba nchara. N'ime ngwaahịa a, anyị na-ahụ mkpuchi mkpuchi ụfụfụ na-acha akwụkwọ ndụ na akpụkpọ anụ tanned na nwa ka Mac anyị wee nwee nchekwa zuru oke. Laa azụ na 2011, Mujjo mepụtara uwe mkpuchi ihu igwe, ma ndị a abụrụla nnukwu ihe na ndị ọrụ, mana ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ iji meziwanye kwa afọ.
Ọ bụrụ na anyị tinye nke gị web Ga-achọta ozi niile dị mkpa gbasara ngwaahịa ọhụrụ a yana usoro nrụpụta pụrụ iche maka oge a pụrụ iche nke ụlọ ọrụ Dutch. Dị ka ihe nlereanya ahụ n'onwe ya mere maka oge a anyị nwere ike ịmasị ya karịa ma ọ bụ obere, mana n'ozuzu ọ bụ ngwaahịa na-enweghị oke na ihe a ka ha mere na Mujjo kemgbe afọ ise. Onye guzobere na onye nduzi okike nke Mujjo, Remy, na-ekwusi ike na ha nọgidere na-agbasi mbọ ike ka ha nwee ike ịlụ ọgụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ngwa maka ndị otu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Mujjo gbara afọ ise wee jiri aka osisi na-agba ya maka Mac
PDF ka Peeji nke Super n'efu maka obere oge
Ihe 8 Apple kwadoro na 2016 MacBook Pro